တရုတ် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အာကာသ ယာဉ်မှုး ပျံသန်းမှု ပြုရန် ပြင်ဆင်နေ ~ Myanmar Express
တရုတ် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အာကာသ ယာဉ်မှုး ပျံသန်းမှု ပြုရန် ပြင်ဆင်နေ
တရုတ် နိုင်ငံမှာ ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အာကာသ ယာဉ်မှုး တစ်ဦးကို အာကာသ အတွင်းသို့ လွှတ်တင်ရန် အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်ကာ
၎င်းတို့ နိုင်ငံအတွက် ဆက်စပ် မော်ဂျူကို အာကာသ စခန်းအတွက် တပ်ဆင်နိုင်ရန် ပေးပို့သည့် ခရီးစဉ်တွင် ထည့်သွင်း စေလွှတ်မည် ဖြစ်သည်။
ယခုလို လိုက်ပါမည့် လေယာဉ်မှုး အဖြစ် အသက် ၃၄ နှစ် အရွယ်ရှိ Liu Yang ဆိုသူ အာကာသ ယာဉ်မှုးကို ရွေးချယ်ထားကာ သူမ အနေဖြင့် နောက်ထပ် အမျိုသား အာကာသ ယာဉ်မှုး နှစ်ဦးနှင့်အတူ စနေနေ့တွင် Shenzhou9အာကာသ ယာဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာအပြင်ဘက်သို့ ထွက်ခွာမည် ဖြစ်သည်။
တရုတ် အာကာသ အစီအစဉ် ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ Wu Ping မှ ပြောရာ၌ စနေနေ့ ဂရင်းနစ် စံတော်ချိန် ၁၂ နာရီ ၃၇ စက္ကန့် တွင် အဆိုပါ ယာဉ်ကို လွတ်တင်မည် ဖြစ်ပြီး ယာဉ်တွင် ပါဝင်သည့် အာကာသ ယာဉ်မှုးများမှ Tiangong ခေါ် မော်ဂျူးကို အသုံးပြုပြီး အာကာသ အတွင်း တပ်ဆင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ယခု ခရီးစဉ် အောင်မြင်ပါက တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် အမြဲတစ်စေ ရှိနေသည့် ကိုယ်ပိုင် အာကာသ စခန်းကို တည်ဆောက်နိုင်သည့် တတိယမြောက် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အမေရိကန်နှင့်ရုရှား နှစ်နိုင်ငံထဲသာလျင် ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေး တမျိုးသားလုံး ပါဝင်သည့် ညီလာခံ ကျင်းပမည်
DKBA ကလိုထူးဘော စစ်ဌာနချုပ်တွင်ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – မြတ်စုမွန်/ ဧရာဝတီ) စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်...
နော်ဝေနိုင်ငံ တွင် စစ်မှု မထမ်း မနေရ ဥပဒေ အရ အမျိုး သမီးများ စစ်မှု ထမ်းဆောင်တော့ မည်
နော်ဝေနိုင်ငံတွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအရ အမျိုးသမီးများကို စစ်မှုထမ်းဆောင်စေရေးအတွက် ပါလီမန် တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး အတည် ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဇွန် ၁၆ ရက်Reuters...
NLD ဘုန်းကြီးလို့ လူသိများတဲ့ သာဓုကျောင်းတိုက်မှ ရွှေညဝါ ဆရာတော် ကလည်း ဆရာတော်ဦးဝီရသူ တို့ တင်သွင်းတဲ့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို ထောက်ခံကြောင်း မနေ့က ပြောကြား...
ဇွန်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၃ ဘာသာမတူပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံး အဆင်ပြေအောင် နေသွားမှာပါဆိုတဲ့ နေနေရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ...
ဂဠုန်ဦးစောထက် ဆိုးသောအမျိုးသားသစ္စာဖောက် များ
ဒီ You Tube ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ ဘားမားကန်ပိန်း-ယူကေဆိုတာနဲ့ ဇိုရာဖန်၊ မြအေးသမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန် တို့ ဟာ မြန်မာပြည်အရေးကို လုပ်နေတာလား၊ နယ်ချဲ့ကုလားကိစ္စ၊ တိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ယူအန်အေ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဆွေးနွေးမည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့(UNA) တို့ဟာ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး...
အနားယူချင် စဖွယ် နံ့သာမြိုင် ပန်းဥယျာဉ်
[image: အနားယူချင် စဖွယ် နံ့သာမြိုင် ပန်းဥယျာဉ်]
ရန်ကုန် ဇွန် ၁၇ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ် စော်ဘွားကြီးကုန်း ကုန်တင်ယာဉ် ရပ်နားစခန်း အနီးတွင...
ဇွန်လ ၁၆ ရက် တနေ့ညက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနဲ့ တမူးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကို နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်က ဒုတိ...
သန်လျင် ရေနံချက်စက်ရုံ ၀န်ထမ်းများ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံ နေရ
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်မြို့ နယ်၊ သန်လျင်- ရန်ကုန် အမှတ် (၁)တံတားအနီးရှိ သန်လျင် အမှတ် (၁) ရေနံချက်စက်ရုံ ၊ သိုလှောင်ဖြန့် ဖြူး...
အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး၏ လျှို့ဝှက်ချက်များ ထပ်မံဖွင့်ချ သွားမည်ဟု စနိုးဒန် ပြောကြား
အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့၏ လျှို့ဝှက်ချက် များကို ဖွင့်ဟ ထုတ်ဖော် ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဟောင်ကောင် တွင် ပုန်းခို နေထိုင်လျက် ရှိသော အက်ဒ်ဝပ်စနိုးဒန်က ၄င်းအနေ...
3. Personal form 4. Remark of the Department on thesis 5. Авфторефрат диссертации ( How to Upload )